Famakiana any Java. Visa mankany Indonezia ~ Journey-Assist - Visas any Indonezia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Java » Famakiana any Java. Visa mankany Indonezia
Visa mankany Java. Karazan'ireo visa ho an'i Indonezia
Tahirin-kevitra ahazoana tombo-kase rehefa tonga (Indonezia. Java)
Ny fandefasana ny fotoana ara-dalàna hatramin'ny 60 andro amin'ny visa toy ny fandikan-dalàna. Ny fanemorana mihoatra ny 60 andro dia efa heloka bevava (heloka be vava) ary voasazy amin'ny sazy goavana - hatramin'ny 500 tapitrisa rupe ($ 35), na na gadra (hatramin'ny 500 taona) aza.
Ny tsy fitovian'ny visa amin'ny fahatongavany sy ny hajia amin'ny fahatongavan'ny (Java)
Ankoatry ny zava-misy fa ny visa iray rehefa tonga dia atolotra ho any amin'ny firenena vitsy noho ny hajia ho tonga, havaozina ny visa raha tonga rehefa tsy mandao ny firenena. Mitentina 35 dolara ny vidin'ny fanitarana. US. Tsy azo havaozina ny hajia, ary raha mila 30 andro mahery ianao, dia voatery handao ilay firenena ianao ary hiverina haka hajia vaovao maimaimpoana indray.
Aorian'ny fandefasanao ny antontan-taratasy takiana dia havoaka aminao ny visa. Nomeny fahefana hijanona ao Indonezia mandritra ny 30-60 andro izy. Ankoatra izany, dia azo ovaina ho visa visa izany. Mandritra izany fotoana izany, ny zo hijanona 4 dia miitatra in-30 - mandritra ny 180 andro isaky ny fotoana. Araka izany, afaka mijanona ara-dalàna ao Indonezia mandritra ny XNUMX andro ianao.
Fahamarinana - 6-12 volana. Ny fe-potoana farany dia faritan'ny masoivoho isaky ny tranga.
Hetra 100 tapitrisa dolara isam-bolana no manan-kery ny visa. Mila mandoa hetra ianao vao mahazo fahazoan-dàlana ao Indonezia - IMTA.
Ho an'ny fahazoan-dàlana hidirana miavaka (EPO) - 1,5 tapitrisa rupee (mitovy amin'ny 2-106 dolara; miankina amin'ny faharetan'ny KITAS).
Ho toy ny fitsipika, ity visa ity dia ampitain'ny visa ho an'ny visa na ny orinasa manasa. Mba hahafahanao mivezivezy any ivelany imbetsaka mandritra ny fandidiana ny KITAS, takiana ny tsanganana iray misaraka - MERP
Fianakaviana KITAS - mpianakavy sy ireo vahiny izay nanambady teratany Indoneziana. Fahamarinana - 5 taona, raha ilaina izany, manavao isan-taona.
Mpianatra KITAS (mpianatra KITAS) - manaova mpianatra.
Pension KITAS (Pension KITAS) - navoakan'ny vahiny mihoatra ny 55 taona. Mba hahazoana izany dia tsy maintsy manome porofo koa ianao fa mahomby ara-bola.
Lafin'ny fitaovam-piadiana ao amin'ny faritanin'i Java